Short – Channel Myanmar
The Croods : Family Tree (2021) The Croods ; Family Tree (2021)Hulu က​နေ စက်တင်ဘာမှာထွက်ရှိထားတဲ့ လူရိုင်းကြီး ခရုဒ်တို့ရဲ့The Croods : Family Treeဆိုတဲ့ Animated Seriesကို တင်ဆက်​ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီSeriesဟာ 2020မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The Croods : A New Ageရဲ့ တိုက်ရိုက်အဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပိုင်းကို မိနစ်၂၀​ကျော်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး ၆ပိုင်းတိတိ ထွက်ရှိထားပါတယ်။ခရုဒ်မိသားစုနဲ့ ဘတ်တာမန်းမိသားစုဟာ အခုဆိုရင် Farmဆိုတဲ့ ဘတ်တာမန်းမိသားစုပိုင်ခြံထဲက Tree Houseမှာ တူတူ​နေထိုင်ကြပါပြီ၊ အိမ်နီးချင်း​​တွေ တကျတ်ကျတ်ဖြစ်ရင် ခွီရတဲ့ထုံးစံအတိုင်း လူရိုင်းအကျင့်စရိုက်၊ အမူအကျင့်​တွေနဲ့ပဲ အသားကျ​နေ​သေးတဲ့ ခရုဒ်မိသားစုဝင်တို့ ဒီ​နေ့​​ခေတ်အသိဉာဏ်နဲ့ ယဉ်​ကျေးတဲ့စရိုက်ရှိတဲ့ဘတ်တာမန်းမိသားစုနဲ့မှ တူတူတွဲ​နေရတဲ့အခါမှာ​တော့ ​ ရေနဲ့ဆီလိုကွာ​နေတဲ့ ယဉ်​ကျေးမှုတွေကို​ ပြောင်းလဲညှိယူရင်း ပဋိပက္ခ​​ပေါင်းစုံဖြစ်လာပါ​​တော့တယ်....Croods Franchiseရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ​​တောရိုင်းသဘာဝအလှအပနဲ့သားရဲ​ကောင်​ အထူးအဆန်းတွေပါမယ်၊ အ​ရေးကြီးရင် ​သွေးထက်ပျစ်တဲ့ မိသားစု​မေတ္တာ​တွေ၊ သူငယ်ချင်းသံ​ယောဇဉ်​တွေပါမယ်၊ ပြဿနာ​ပေါင်းစုံ​ကြောင့် ခွီလည်းခွီရမယ်၊ ရယ်လည်းရယ်ရမယ်၊ တစ်ပိုင်းချင်းစီမှာပေးချင်တဲ့ Message​တွေပါမယ်၊ Dreamwork ကုမ္ပဏီကပဲ ရိုက်ကူး​ပေးထားတယ်၊ ဒီ​လောက်ဆို Animationကြိုက်တဲ့ Cmပရိတ်သတ်​တွေ အဖို့ လက်မလွတ်သင့်တဲ့ ...
The Croods : Family Tree (2021)
Sweet Curse (2021) Sweet Curse လူတစ်ယောက်ကိုချစ်မိလာပြီဆို အဲ့လူကို ရယူပိုင်ဆိုင်လိုစိတ် အနည်းနဲ့အများတော့ ရှိကြမှာ မဟုတ်လား?ရယူလိုစိတ်တအားများလာတဲ့အခါမှာတော့ မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ရအောင်လုပ်ကြတာ လူ့အကျင့်ပါပဲ။ဟာဂျွန် ဆိုတဲ့ ခပ်ချောချောကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ချစ်မိသွားခဲ့တဲ့ မင်အူ ဟာ ဂျွန့်ဆီက ချစ်ခြင်းမေတ္တာထက် သူ့ကိုပဲအပိုင်လိုချင်လာပါတယ်။သူငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးပဲ ဖြစ်ကြတဲ့အတွက် မင်အူဟာ အဆင့်တက်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းတစ်လမ်းကို ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်များလွန်းတဲ့ မင်အူ အနေနဲ့ တကယ်ပဲ ဂျွန့်ကို ပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်မလား သူရွေးလိုက်တဲ့ လမ်းကရော အန္တရာယ်ကင်းပါ့မလားအသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Korea Short Movie လေးဖြစ်ပြီး ညစ်ညမ်းတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေပါဝင်တာမလို့ မိသားစုနဲ့အတူကြည့်ဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။အညွှန်း နဲ့ ဘာသာပြန်ကတော့ HAW ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Quality….WEB-DL 1080p and 720p File size…462 MB and 212 MB Format…mp4 Duration….31min Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator ..... HAW Encoder .....August
PUBG Ground Zero (2021) PUBG - Ground Zero (2021)PUBG ထဲက Playerunknown ရဲ့ Battleground's Universe ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုလေးပါ။မာဒုန်ဆော့ ရဲ့ ဖန်များ အားပေးနိုင်ရန် အလို့ငှာ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ .......အကျဉ်းသား မာဂန်ဂျယ် ဟာ အင်မတန် အားသန်ပြီး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူကြီး ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကို အသေရရ အရှင်ရရ ဖမ်းမိတဲ့သူကို ဆုတော်ငွေ ချီးမြှင့်မယ်လို့ ကြော်ငြာလိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ .....ထောင်သားအားလုံးက ဖမ်းဆီးဖို့ ပြင်ဆင်ကြပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူသန်ကြီး မာဒုန်ဆော့ ဘယ်လောက်ထိ သန်မာဦးမလဲ? ကြမ်းပြ ရမ်းပြဦးမလဲဆိုတာကို ဒီဇာတ်လမ်းတိုလေးထဲမှာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ။၉ မိနစ်ဆိုပေမယ့် သဘောတွေ့ မနောခွေ့မိမှာတော့ အသေအချာပါ။ဘာသာပြန်ပေးထားတာကတော့ August ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။File size…140 MB Quality….1080p Format…mp4 Duration….9min Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator ..... August Encoder ..... August
Lamp Life (2020) Lamp Life (2020)=============IMDb Rating - 6.7/10 ဒီတစ်ခေါက်က ကလေးရော လူကြီးရောအကြိုက် toy story က အသစ်ထပ်ထွက်တဲ့ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတိုလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ ကစားစရာအရုပ်ကလေး ဘိုတစ်ယောက် မီးအိမ်ဘဝကနေ ဘယ်လိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာပါ . . .Toy story 1,2,3,4 ထွက်ရှိထားပြီး လူကြိုက်များတဲ့ ကာတွန်းကားကောင်းတွေထဲက lampရဲ့အပိုင်းတိုးလေးမို့ ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာမရှိပါဘူး။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ Parris ပဲဖြစ်ပါတယ်။) Quality – 1080p WebRipDuration - 10minSubtitle – Myanmar HardsubFormat – Mp4Genre : Animation, Short, AdventureSource : 1080p.WebRipTranslator – ParrisEncoder – SWM
Minions Holiday Special (2020) Illumination Presents: Minions Holiday Special (2020)=======================================IMDb Rating - 7.0/10#Unicodeကိုဗစ်ကြောင့်ခရီးမထွက်ရလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့လူတွေကိုပျော်ရွှင်စေဖို့ Minions လေးတွေလာပါပြီ။Holiday Special အနေနဲ့ Minions ဇာတ်လမ်းတိုလေး(၄)ပုဒ်ကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။Minionsလေးတွေကိုမြင်တာနဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေက ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိနေကြမယ်လို့ထင်တာကြောင့် ထွေထွေထူးထူးမပြောတော့ပါဘူး။ဇာတ်လမ်းတိုလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် . နည်းနည်းလေးပြောပြလိုက်ရုံနဲ့ အနှစ်အရသာလျော့သွားနိုင်တာမို့ မိမိဘာသာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုဒေါင်းကြည့်ကြပါကုန်။အခုကားလေးကိုကြည့်ပြီး တစ်ရက်တာကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းလိုက်နိုင်ကြပါစေ။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ Chit Tee ပဲဖြစ်ပါတယ်။ #Zawgyiကိုဗစ္ေၾကာင့္ခရီးမထြက္ရလို႔စိတ္ညစ္ေနတဲ့လူေတြကိုေပ်ာ္႐ႊင္ေစဖို႔ Minions ေလးေတြလာပါၿပီ။Holiday Special အေနနဲ႔ Minions ဇာတ္လမ္းတိုေလး(၄)ပုဒ္ကို႐ိုက္ကူးထားတာျဖစ္ပါတယ္။Minionsေလးေတြကိုျမင္တာနဲ႔ ဇာတ္လမ္းေလးေတြက ဘယ္လိုျဖစ္မယ္ဆိုတာကိုသိေနၾကမယ္လို႔ထင္တာေၾကာင့္ ေထြေထြထူးထူးမေျပာေတာ့ပါဘူး။ဇာတ္လမ္းတိုေလးေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ . နည္းနည္းေလးေျပာျပလိုက္႐ုံနဲ႔ အႏွစ္အရသာေလ်ာ့သြားႏိုင္တာမို႔ မိမိဘာသာဒီဇာတ္လမ္းေလးကိုေဒါင္းၾကည့္ၾကပါကုန္။အခုကားေလးကိုၾကည့္ၿပီး တစ္ရက္တာကိုေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ျဖတ္သန္းလိုက္ႏိုင္ၾကပါေစ။(ဒီဇာတ္လမ္းရဲ႕ အၫႊန္းနဲ႔ဘာသာျပန္ေရးသားေပးသူကေတာ့ Chit Tee ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Quality – 720p WebRipDuration - 21 minSubtitle – Myanmar HardsubFormat – Mp4Genre : Animation, Short, ComedySource ...
The Lego Star Wars Holiday Special The lego Star War Holiday Special 2020 ========================================= စတားဝါး လီဂို ကာတွန်း ဇာတ်လမ်းတို့လေးကတော့ ၄၅ မိနစ် စာပဲ ရှိပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ရယ်ရတယ်။ Star Wars The Rise of Skywalker အပြီး ဇာတ်လမ်းကို ချိတ်ထားတာပါ။ ရေး နဲ့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေ အနားယူနေချိန် ရေးဟာ ဖင်းကို ဂျဒိုင်း ပညာတွေ သင်ပေးဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဂျ ဒိုင်း ဖတ်စာအုပ်တွေကို လိုက်ရှာကြည့်တဲ့အခါမှ ဂျဒိုင်းတစ်ယောက်ဟာ Force ကိုသုံးပြီး အချိန်ခရီးသွားလို့ရတဲ့ စက် ရှိတာကို တွေ့ရှိသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီစက်ကို သုံးပြီး သူ့ရဲ့ အရင်ရှိခဲ့တဲ့ ဂျဒိုင်းဆရာတပည့်တွေ သင်ကြားပုံကို လေ့လာဖို့ ထွက်လာပါတော့ တယ်။ ယိုးဒါးနဲ့ လုခ်၊ ကွိုင်ဂွန် နဲ့ ...
Once UponaSnowman (2020) Once UponaSnowman (2020)======================IMDb Rating - 7.2/10 #Unicode အယ်လ်ဆာက အိုလတ် လေးကို ဖန်ဆင်းလိုက်ပြီးနောက် . . . အန်နာ နဲ့ အိုလတ် တို့မတွေ့ခင်ကြားကာလက အိုလတ် လေးရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်စွန့်စားခန်း Short Story အသစ်လေးပါ။၈ မိနစ်စာ Short Story လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။(ဒီမူဗီလေးကို ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ Littleneo ပဲဖြစ်ပါတယ်။)#Zawgyiအယ္လ္ဆာက အိုလတ္ ေလးကို ဖန္ဆင္းလိုက္ၿပီးေနာက္ . . . အန္နာ နဲ႔ အိုလတ္ တို႔မေတြ႕ခင္ၾကားကာလက အိုလတ္ ေလးရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္စြန႔္စားခန္း Short Story အသစ္ေလးပါ။၈ မိနစ္စာ Short Story ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။(ဒီမူဗီေလးကို ဘာသာျပန္ေပးထားသူကေတာ့ Littleneo ပဲျဖစ္ပါတယ္။) Quality – 720p WebRipDuration - 8 minSubtitle ...
The Spooky Tale of Captain Underpants Hack-a-ween (2019) The Spooky Tale of Captain Underpants Hack-a-ween (2019)===========================================IMDb Rating - 5.7/10#Unicodeအနောက်နိုင်ငံတွေမှာအောက်တိုဘာ(၃၁)ရက်ဆိုရင် ကလေးတိုင်းပျော်ရတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုရှိပါတယ်။သိကြမှာပေါ့ Halloween(ဟောလိုးဝင်း)ဆိုပြီး ဟောလိုးဝင်းညတွေမှာကလေးတွေဟာဝတ်စုံဆန်းတွေဝတ်ပြီးတစ်အိမ်တက်တစ်အိမ်ဆင်း သကြားလုံးတောင်းကြပါတယ်။ သကြားလုံးမပေးရင်သရဲလိုလုပ်ခြောက်ခံရမယ့်ဓလေ့လေးပါ။ ပီကွာဆိုတဲ့မြို့လေးကမယ်လ်ဗင်ဆိုတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဟာဟောလိုးဝင်းကိုမုန်းရာကနေ ဖျက်ပစ်ဖို့ထိလူစုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မယ်လ်ဗင်ဘာလို့ဟောလိုးဝင်းကိုမုန်းရတာလဲရယ်ဟောလိုးဝင်းကိုမပပျောက်စေချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်စု ဘယ်လိုအကြံတွေထုတ်ကြမလဲရယ်ဆိုတာတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့Netflix Animation ကားလေးပါ။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန် ရေးသားပေးသူကတော့ Hnin Wut Yi ပဲဖြစ်ပါတယ်။)#Zawgyiအေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာေအာက္တိုဘာ(၃၁)ရက္ဆိုရင္ ကေလးတိုင္းေပ်ာ္ရတဲ့ပြဲေတာ္တစ္ခုရွိပါတယ္။သိၾကမွာေပါ့ Halloween(ေဟာလိုးဝင္း)ဆိုၿပီး ေဟာလိုးဝင္းညေတြမွာကေလးေတြဟာဝတ္စုံဆန္းေတြဝတ္ၿပီးတစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း သၾကားလုံးေတာင္းၾကပါတယ္။ သၾကားလုံးမေပးရင္သရဲလိုလုပ္ေျခာက္ခံရမယ့္ဓေလ့ေလးပါ။ ပီကြာဆိုတဲ့ၿမိဳ႕ေလးကမယ္လ္ဗင္ဆိုတဲ့ကေလးတစ္ေယာက္ဟာေဟာလိုးဝင္းကိုမုန္းရာကေန ဖ်က္ပစ္ဖို႔ထိလူစုႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မယ္လ္ဗင္ဘာလို႔ေဟာလိုးဝင္းကိုမုန္းရတာလဲရယ္ေဟာလိုးဝင္းကိုမပေပ်ာက္ေစခ်င္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ဘယ္လိုအႀကံေတြထုတ္ၾကမလဲရယ္ဆိုတာေတြကို႐ိုက္ကူးထားတဲ့Netflix Animation ကားေလးပါ။(ဒီဇာတ္လမ္းရဲ႕ အၫႊန္းနဲ႔ဘာသာျပန္ ေရးသားေပးသူကေတာ့ Hnin Wut Yi ပဲျဖစ္ပါတယ္။) Quality – 720p WebRipDuration - 45 minSubtitle – Myanmar HardsubFormat – Mp4Genre : Action, ...
One Perfect Day (2013) [Unicode]One Perfect Day ဆိုတဲ့ Short Film လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းဝန်းချောက အချစ်မှာ အမြဲရှုံးနိမ့်နေကျ အရှုံးသမားတစ်ယောက်ပါ...Blind Date တွေအများကြီး လုပ်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ တုံးအအ ပုံစံကြောင့် မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ ငြင်းဆိုမှုကို အကြိမ်ကြိမ် ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာ သူ့ရဲ့ ဖူးစာလို့ ထင်ရတဲ့ မိန်းကလေးကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့မိန်းကလေးနဲ့ကော သူအဆင်ပြေပါ့မလား ဒီတစ်ခါ အချစ်ရေးမှာ အောင်နိုင်သူဖြစ်လာမှာလားဆိုတာ ဒီဇာတ်လမ်းတိုလေးမှာ ကြည့်ရှုလိုက်ပါနော်...။( အညွှန်းရေးသားထားသူကတော့ Seung ဖြစ်ပါတယ် )[Zawgyi]One Perfect Day ဆိုတဲ့ Short Film ေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ။ဇာတ္လမ္းအက်ၪ္း၀န္းေခ်ာက အခ်စ္မွာ အၿမဲရႈံးနိမ့္ေနက် အရႈံးသမားတစ္ေယာက္ပါ...Blind Date ေတြအမ်ားႀကီး လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ တုံးအအ ပုံစံေၾကာင့္ မိန္းကေလးတိုင္းရဲ႕ ျငင္းဆိုမႈကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ခံခဲ့ရပါတယ္ဒါေပမယ့္ တစ္ေန႔မွာ သူ႔ရဲ႕ ဖူးစာလို႔ ...
DC Showcase: The Phantom Stranger (2020) DC Showcase: The Phantom Stranger (2020)================================IMDb Rating 6.4/10#Unicodeလျှောက်သွားနေတဲ့ သူတိုင်းက လမ်းပျောက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လျှောက်သွားနေတဲ့သူတော်တော်များများကတော့ လမ်းပျောက်နေကြပါတယ် တဲ့။ ဒီစာသားလေးက DC Showcase တွေထဲက The Phantom Stranger ရဲ့ အကြောင်းကို ပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုလေးရဲ့ အစမှာပါလာတာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းတိုလေးထဲမှာ အမှန်တရားကို ရှာဖွေရင်းလမ်းပျောက်နေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် Sebastian ဆိုတဲ့ ဝိညာဉ်တွေကို စုပ်ယူစားသောက်နေတဲ့ မကောင်းဆိုးရွားတစ်ကောင်ဆီကိုရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့ လမ်းမှားကို ရွေးမိတဲ့ သူ့ကို Phantom Stranger က လမ်းမှန်ကို ရှာဖွေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တရားဆိုတာ လမ်းရဲ့အဆုံးမှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လမ်းကိုလျှောက်နေတဲ့သူရဲ့ ရင်ထဲမှာရှိနေတာပါလို့ ပြောသွားပါတယ်။ Dialogue တွေကတော့ ကြွေချင်စရာတွေပါပဲဗျာ။မှော်စွမ်းအားကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး Immortal တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Phantom Stranger အကြောင်းတစ်ချက်လောက် ရှိုးလိုက်ကြပါဦး။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ ...
Olaf’s Frozen Adventure (2017) Olaf's Frozen Adventure (2017) IMDb - 5.5/10_____Rotten - 57% When the kingdom of Arendelle empties out for the holiday season, Anna and Elsa realize that they have no family traditions of their own. So Olaf sets out onamerry mission to bring home the very best traditions and save Christmas. File Size : (200 MB) Quality : WEB-DL 720p Running Time : 22 min Format ...
Kung Fu Panda: Secrets of the Scroll (2016) Kung Fu Panda: Secrets of the Scroll (2016)________IMDb - 7.1/10 ဒီ ၂၃ မိနစ်စာပဲရှိတဲ့ ကွန်ဖူး ပန်ဒါကားလေးက ပန်ဒါဇာတ်ကားအားလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်ပါပဲ IMdb rating 7.1 ရထားပြီး Animation ကြိုက်သူတွေလက်မလွှတ်သင့်ပါဘူး ဒီဇာတ်လမ်းလေးက ညီနောင်ငါးဦး ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာ ဖေါ်ညွှန်းထားတာပါ ကွန်ဖူး ပန်ဒါဆိုရင် ကလေးလူကြီးသိနေကြပြီးဖြစ်လို့ အထွေအထူး မညွှန်းတော့ပါဘူး ကွန်ဖူး ပန်ဒါ သုံးကားစလုံးကြည့်ဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကားလေးက မဖြစ်မနေကြည့်ရမဲ့ ကားထဲပါသွားပါပြီ..... (ဘာသာပြန်သူ Aye Min Oo ပါ) File Size - 134 MB Quality - 1080p Duration - 23 min Translator - Aye Min Oo Encoder - Littleneo